Ungabunciphisa kanjani ubukhulu be-PDF: Zonke izindlela | Izindaba zamagajethi
Ungayicindezela kanjani i-PDF
U-Eder Esteban | | Software, Izifundiswa
I-PDF yifomethi esisebenza ngayo njalo. Ezimweni eziningi sifuna ukuguqula le fomethi iye kwabanye, njengakwi-JPG noma i indlela yokuwavula. Yize esinye isimo esijwayelekile ukuthi sifuna ukunciphisa usayizi walolu hlobo lwefayela. Ngokuvamile, amafayela esinawo ngale ndlela asinda. Ngakho-ke, uma kufanele sithumele eziningana nge-imeyili, singakhawulelwa.
Yize kuneziningana izindlela zokwehlisa usayizi wefayela le-PDF. Ngale ndlela, ngaphandle kokulahlekelwa imininingwane noma ukwenza ikhwalithi ibe yimbi, sizokwenza leli fayela okukhulunywa ngalo libe nesisindo esincane. Okungenza kube lula ukuthumela okuningi nge-imeyili noma ukumane uthathe isikhala esincane kukhompyutha yakho.
1 Isiguquli se-PDF esiku-inthanethi
2 Hlola kuqala ku-Mac
3 Sebenzisa i-Adobe Acrobat Pro
Isiguquli se-PDF esiku-inthanethi
Indlela yokuqala esinganciphisa ngayo usayizi wePDF ilula kakhulu. Njengoba sikwazi ukusebenzisa amakhasi wewebhu lokho vumela lawa mafayela ukuthi anciphise isisindo sawo. Ngokuhamba kwesikhathi, amakhasi amaningi anjalo avele. Kuzo zonke izimo, ukusebenza kwazo kuyefana. Kumele ulayishe ifayili noma amafayela okukhulunywa ngawo kuwo bese uvumela iwebhu ukuthi yenze umsebenzi wayo. Okuzokwenza ukunciphisa isisindo sayo. Ngemuva kwalokho singazilanda kwikhompyutha. Leyo yindlela elula ngayo inqubo.
Kukhona amanye ala makhasi ewebhu athandwa kakhulu kubasebenzisi abaningi. Ngakho-ke abazivezi izinkinga uma kuziwa ekusetshenzisweni. Kuzoncika ngokwengxenye kokuthandwa ngumuntu ngamunye. Kepha ukusebenza kwazo zonke kuyefana kuzo zonke izimo. Izinketho ezinhle kakhulu namuhla yilezi:
Kuzo zonke kufanele ulayishe ifayela kuwebhu naku- linda ukuthi lehliswe ngosayizi. Kunezimo lapho ukonga usayizi engxenyeni yakho kungamangalisa. Ngakho-ke kufanelekile ukucubungula le nketho. Futhi, kulula ukuyisebenzisa. Mhlawumbe owokuqala wamakhasi ewebhu waziwa kakhulu kunakho konke. Kepha bonke bazokunikeza ukusebenza okuhle kulokhu.
Hlola kuqala ku-Mac
Kulabo basebenzisi iMac, banendlela etholakalayo kwikhompyutha ebavumela ukuthi banciphise usayizi we-PDF ngaphandle kokuya ekhasini lewebhu. Lokhu ukubuka kuqala ku-Mac, okuzonikeza lokhu kungenzeka. Into yokuqala okufanele uyenze ukuvula idokhumenti ye-PDF okukhulunywa ngayo. Ukuze wenze lokhu, kuzofanela uye kufayela bese ukhetha open. Okulandelayo, kufanele ukhethe ifayela ofuna ukulivula ngaleso sikhathi, ukunciphisa usayizi walo.
Uma usunefayela okukhulunywa ngalo esibukweni, kufanele uchofoze inketho yefayela ngaphezulu kwesikrini futhi. Kusuka kokukhethwa kukho manje okuvela kumenyu yokuqukethwe, kufanele uchofoze ku- «Export as ...». Ngemuva kwalokho kuvuleka iwindi elisha lapho ungamisa khona indlela ofuna ukuthumela ngayo ifayili.
Esinye sezigaba esibukweni yifomethi. Eduze kwaso kunohlu lokudonsela phansi, lapho i-PDF itholakala khona njengamanje. Noma singashintsha ifomethi yefayela nganoma yisiphi isikhathi, noma kunjalo manje ngeke sikwenze. Ngezansi kwalolu khetho sithola enye, ebizwa nge-Quartz Filter. Eduze kwale nketho kukhona olunye uhlu olwehlayo, okufanele sichofoze kulo.
Lapho wenza lokhu, kuvela uchungechunge lwezinketho esibukweni, esizosivumela ukuthi senze okuthile mayelana nefayela elishiwoyo. Uzobona ukuthi enye yezinketho kulolu hlu ibizwa ngokuthi "Nciphisa usayizi wefayela". Yilapho okumele sichofoze khona kulokhu. Lokhu yilokho okuzosivumela ukuthi sinciphise usayizi wale PDF ethile. Ngemuva kwalokho, kufanele sikhethe indawo lapho sifuna ukulondoloza khona ifayili.
Ngale ndlela, uzobona ukuthi i-PDF iye yaba lula, ngaleyo ndlela uthathe isikhala esincane ku-Mac yakho. Indlela elula, kepha engasiza kakhulu uma une-Mac. Lo msebenzi ukhona cishe kuzo zonke izinhlobo ze-MacOS. Ngakho-ke ungayisebenzisa ngaphandle kwenkinga.
Sebenzisa i-Adobe Acrobat Pro
Ekugcineni, inketho engasetshenziswa futhi kumakhompyutha weWindows, ngaphezu kwe-Mac. Kulokhu, I-Adobe Acrobat Pro kufanele ifakwe kuyo ukuze ukwazi ukwenza le nqubo yokwehlisa usayizi wefayela le-PDF. Into yokuqala okufanele uyenze ukuvula ifayela elibuzwayo ofuna ukunciphisa usayizi walo ohlelweni. Lapho leli fayela selivele likusikrini, singaqala inqubo.
Kufanele sichofoze kunketho yefayela phezulu kwesikrini. Imenyu yokuqukethwe izovela esikrinini ngezinketho ezahlukahlukene. Enye yezinketho, lapho kufanele sichofoze khona, ukusindisa njengenye. Uma uchofoza ngegundane kule nketho, imenyu izovela ngakwesokudla sayo. Ngale ndlela, izinketho ezahlukahlukene zizokhonjiswa, ezivumela ukuguqula i-PDF ibe amafomethi ahlukahlukene.
Phakathi kwalezi zinketho sithola eyodwa esiyithandayo. Kuyindlela ebizwa ngosayizi owehlisiwe we-PDF, ebonakala maphakathi nohlu oluthiwe. Kufanele uchofoze kuyo ukuze uqhubeke nenqubo. Ngemuva kwalokho, uhlelo luzosibuza ukuthi yiziphi izinguqulo esifuna luhambisane, kukhona uhlu lokudonsela phansi esibukweni ukunquma lokhu. Kungcono ukhethe uhlobo lwakamuva lohlelo, ngoba luzophinde lwehlise usayizi wefayela.
Uma lokhu sekwenziwe, kufanele ukhethe indawo lapho ufuna ukusindisa khona wathi ifayela kukhompyutha yakho. Uzobona ukuthi usayizi wayo wehliswe kakhulu. Enye indlela enhle yokwenza i-PDF incane.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba zamagajethi » General » Izifundiswa » Ungayicindezela kanjani i-PDF
Inethiwekhi yeVodafone iyehla, ishiya izinkulungwane zamakhasimende ngaphandle kwe-inthanethi
Ividiyo yokuqala ihlungiwe ngokuvela kwe-Galaxy S10 ne-S10 +